လျှောက်လွှာကိစ္စ - Weibo Electronic Co. , Ltd
လျှောက်လွှာကိစ္စ - ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း
Weibo အီလက်ထရောနစ်သုံးဆင့်ပါဝါပြည့်စုံသောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအပိုင်း၊ multi-circuit ရထားလမ်းအမျိုးအစားစွမ်းအင်မီတာနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာခန်းစွမ်းအင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်ယိုစိမ့်သောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာကိုတီထွင်ခဲ့သည်၊ လေအေးပေးစက်ပစ္စည်းကိရိယာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအားကာကွယ်မှု၊ ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ။ အထူးသဖြင့်ခန်းစွမ်းအင်သုံးအာရုံခံကိရိယာများ၊ AC transmitter အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းခုခံနိုင်သည့်အာရုံခံကိရိယာများစသည်တို့ပါ ၀ င်သောသီးခြားအာရုံခံကိရိယာများသည်မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တိကျမှုမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသောအထီးကျန်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်မှုနှင့်အထူးပြုလုပ်ထားသော EMC နှင့်လျှပ်စီးကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြင့်အပူချိန်ကျယ်ပြန့်စွာရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များသည်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတောင်ဘက်မှမြောက်မြောက်ရေလွှဲပြောင်းစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ“ စောင့်ကြည့်မခံရသူများ၊ တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်သူနည်းနည်းများကိုအလိုအလျှောက်စောင့်ကြည့်ခြင်း” နှင့်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစက်ရုံများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတို့အတွက်လိုအပ်ချက်များလည်းရှိသည်။ တိုးပွားလာ။
ထုံးစံအတိုင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည်ဖိအား / အာရုံခံကို အသုံးပြု၍ ဖိအား / ဖိအားကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာ။ မော်တာဝန်၏ overload protection ကိုသိရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းသည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲရုံသာမကအရေးကြီးသည့်အချက်မှာ၊ ၎င်းအာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစား၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော - ဖိအားအထိခိုက်မခံသောအစိတ်အပိုင်းများသည်ပြင်ပအပူချိန်၊ တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကိုအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကော်အလွှာ။ ထို့အပြင်၊ အသုံးချကိရိယာများမှတိုင်းတာနိုင်သောအင်အားအတိုင်းအတာမှာအတော်အတန်ကျယ်သောကြောင့်တိုက်ရိုက်အားတိုင်းတာခြင်းအမျိုးအစား၏တိကျမှုသည်နည်းပါးပြီးလယ်ကွင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲသည်။
လျှောက်လွှာကိစ္စ - Pumping ယူနစ်အတွက်ကောင်းစွာအသိဉာဏ်ရှိသောအဝေးထိန်းစနစ်
၁။ pump pump unit power power monitoring (သုံးဆင့်ပါဗို့အားနှင့်လက်ရှိသွင်းအားစု၊ RS485 output)
Analog transmitters များအစားထိုးရေတွင်းများကိုအထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောသီးခြားပေါင်းစပ်ထားသော parameter သည်အသိဉာဏ်အာရုံခံကိရိယာ။ Detection signal သည် AC 3-phase voltage နှင့် 3-phase current ဖြစ်သည်။ output ပါ ၀ င်မှုသည် ၃ ဗို့ (ထိရောက်သောတန်ဖိုး)၊ ၃ ခု (ထိရောက်သောတန်ဖိုး)၊ တက်ကြွသောစွမ်းအင်၊ ဓာတ်ပြုစွမ်းအား၊ ပါဝါအချက်၊ တက်ကြွသောစွမ်းအားနှင့်ဓာတ်ပြုစွမ်းအားနှင့်ကြိမ်နှုန်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ output သည်ဆက်သွယ်ရေး interface မှလိုအပ်သောလျှပ်စစ် parameter နံပါတ်၏စံတန်ဖိုးကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် AC sampling လုပ်ဆောင်ရန် RTU ကိုမလိုအပ်ပါ။
၂။ အပ်နှံထားသောသတ်မှတ်ထားသောဝန်အာရုံခံကိရိယာ (အကွာအဝေး: ၀ မှ ၁၀၀ ကီလို ၀ န်ဆောင်မှု၊ ထုတ်လွှတ်မှု sensitivity: 1mVV)
ဆယ်နှစ်ကျော်ရေနံထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွင်အသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အားလုံးရာသီဥတုအသုံးပြုမှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်အပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရေစိုခံဒီဇိုင်း; တိုးတက်လာသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောပလပ်များ၊ လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ တသမတ်တည်း output ကိုနှင့်ပြည့်စုံလဲလှယ်နိုင်သည်။
3. ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ (အကွာအဝေး:0~ 10Kpa မှ0~ 500Mpa အထိ, output: စံနှစ်ခု - ဝါယာကြိုးစနစ်)
ဒီထုတ်ကုန်သည်တင်သွင်းထားသောဆီ - ဖြည့်ထားသောအထီးကျန်အစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ်သံမဏိ strain-inducing body တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုပြီး solid-state integration ဖြစ်စဉ်ကို isolation diaphragm technology နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ဆီလီကွန် chip ကိုသံမဏိမြှေးမှတဆင့်ဆီလီကွန်ရေနံနှင့်ပြည့်စုံသောဆလင်ဒါအခေါင်းပေါက်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအပြင်ဘက်အဖုံးသည်၎င်းကိုတိုင်းတာခြင်းအလတ်စားမှသီးခြားခွဲထုတ်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
4. Angular Displacement Sensor (အကွာအဝေး:0~ 100,0~ 180,0~ 270,0~ 340 [စဉ်ဆက်မပြတ်] output ကို 0-5V)
ဤထုတ်ကုန်သည်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အလှည့်အနေအထားကိုတိုင်းတာရန်ဗို့အားနှင့် ၀ င်ရိုးအလှည့်အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်တိုင်းတာရန်အာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောတိကျမှု၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ ကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုချောချောမွေ့မွေ့ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
၅။ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ (ရေတွင်းအတွင်းရှိအပူချိန် PT1000 ခုခံနိုင်စွမ်း)
တင်သွင်းထားသော PT1000 အထုပ်; တည်ငြိမ်သောဖိအားခံနိုင်မှုသည် 30Mpa ထက်ကြီးသည်။ အပူချိန်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အစာရှောင်သည်, အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်နှင့်အညီအာရုံခံပုံသဏ္shapeာန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: -50 ° C မှ +400 ° C, အတိအကျတန်းအေ။
၆။ အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးထိန်းချုပ်မှု (သုံးမော်နီတာအချက်ပြအာရုံခံကိရိယာ)
ယနေ့လုံခြုံရေးနယ်ပယ်တွင်နည်းပညာအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Dual-window detector တစ်ခုသည် master-slave dual-group အဆင့်မြင့်တိကျသော passive infrared detection device နှင့် glare anti-circuit နှင့် fuzzy logic digital core တို့ပါဝင်သည်။